လူမျိုးစွဲဝါဒ - ဝီကီပီးဒီးယား
လူမျိုးရေးဝါဒဆိုသည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုးက အခြားလူမျိုးထက် အထက်တန်းကျသာလွန်သည်ဆိုသည့် ယုံကြည်မှု ဖြစ်သည်။ လူမျိုးကွဲဖြစ်သောကြောင့် အခြားတစ်ပါးသူများအပေါ် တဘက်စောင်းနင်းအယူအစွဲရှိခြင်း၊ ခွဲခြားနှိမ်ချခြင်း သို့မဟုတ် ရန်လိုမုန်းထားခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ပါးသော လူမျိုး တိုင်းရင်းသားများအား ခွဲခြားဆက်ဆံသင့်သည် ဟူသော ယုံကြည်မှုသော်လည်းကောင်း ပါဝင်သည်။ ခေတ်သစ်လူမျိုးရေးဝါဒ မူကွဲများသည် အများအားဖြင့် လူအများကြားက ဇီဝဗေဒအရကွဲပြားမှုအား လူမှုရေးအရ ရှုမြင်သဘောထားပုံပေါ် အခြေပြုသည်။ အဆိုပါ ရှုမြင်ပုံများ သည် မျိုးရိုးလိုက်သော စရိုက်၊ အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံလျက် မတူကွဲပြားသောလူမျိုးများအကြား အဆင့်အနိမ့်အမြင့် သတ်မှတ်သည့် လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှုများ၊ ကျင့်သုံးမှုများ သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှုများ ၊ နိုင်ငံရေးစနစ်များ အသွင်ဆောင်သည်။
နှိမ်ချဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးမှုသော်လည်းကောင်း ယင်းဥပဒေကိုသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီကိုဖြစ်စေ မျက်စိမှိတ်လက်ခံခြင်း သို့တည်းမဟုတ် စက်ဆုပ်ခြင်းအား ဖော်ပြခွင့်ပြုသော နိုင်ငံရေး စနစ်များ (ဥပမာ အသားအရောင်ခွဲခြားမှု) အရ ဌာနေတိုင်းရင်းသားဝါဒ၊ လူမျိုးခြားအား မနှစ်မြို့မှုဝါဒ၊ တစ်ပါးသူအယူအဆ၊ အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှု၊ ဝါစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဘဝင်မြင့်မှု ကဲ့သို့သော လူမှုသွင်ပြင်များ ပါဝင်သည်။
ခေတ်ပေါ်လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်တွင် "လူမျိုး" နှင့် "တိုင်းရင်းသား" သဘောတရားများကို သီးခြားစီစဉ်းစားသော်လည်း ရေပန်းစားသောအသုံးပြုမှုများ၌သာမက ပိုရှေ့ကျသောလူမှုသိပ္ပံစာပေတွင် ယင်းအသုံးအနှုန်း (၂) ခုကို ထပ်တူထား သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ "တိုင်းရင်းသား" မှာ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ သတ်မှတ်သည့် လူမျိုး - အုပ်စုတစ်ခု၏ အရင်းခံ မွေးရာပါ ဖြစ်သော အရည်အသွေးများပေါ်အခြေပြုပိုင်းခြားမှု (ဥပမာ။ ။ တူညီသော ဘိုးဘေးဘီဘင်ရှိခြင်း သို့တည်းမဟုတ် တူညီသောအပြုအမူရှိခြင်း) - ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူမျိုးရေး နှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည် ကွဲပြားမှုများအား လူမျိုးရေးရာအဖြစ် စဉ်းစားခြင်းမရှိစေကာမူ တိုင်းရင်းသား သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုပေါ် အခြေခံသည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ အရ လူမျိုး နှင့် တိုင်းရင်းသား ဖြစ်မှုအပေါ် ခွဲခြားမှုအကြား ကွာခြားမှု မရှိပေ။ လူမျိုးကွဲပြားမှုပေါ်အခြေတည်သည့် ဘဝင်မြင့်မှုမှာ သိပ္ပံနည်းအရ မှားယွင်းပြီး ကိုယ့်ကျင့်တရားအရ ရှုတ်ချသင့်ကာ လူမှုရေးအရ တရားမျှတမှုမရှိဘဲ အန္တရာယ်များသည့်အရာဟု ကုလသမဂ္ဂညီလာခံက ကောက်ချက်ချသည်။ သီအိုရီအရဖြစ်စေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအရဖြစ်စေ မည်သည့်နေရာတွင်မဟူ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအတွက် လက်ခံစရာမရှိဟု ကြေညာခဲ့ပြန်သေးသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ လူမျိုးရေးဝါဒမှာ အတ္တလန်တစ်ကျွန်အရောင်းအဝယ်နောက်ကွယ်မှ အဓိကမောင်းနှင်အား ဖြစ်သည်။ ၁၉ နှင့် ၂၀ ရာစုနှစ်များအတွင်းက အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ လူမျိုးရေးအဆင့်အတန်းခွဲခြားမှု နှင့် တောင်အာဖရိက၌ အသားရောင်ခွဲခြားမှု နောက်ကွယ်မှ ပင်မအကြောင်းရင်းခံ ဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု အတွင်း ၁၉ နှင့် ၂၀ ရာစု လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကို ကောင်းစွာမှတ်တမ်းမှတ်ရာ ပြုစုထားပြီး လူမျိုးရေးလေ့လာမှုများတွင် ရည်ညွှန်းကိုးကားသည်။ ဟော့လာကော့စ်(ဂျူးလူမျိုးများအား သုတ်သင်ခြင်း)၊ အမေရိကန်ဂျနိုဆိုဒ် ကဲ့သို့ လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုများသာမက အမေရိက၊ အာဖရိက နှင့် အာရှတိုက်များ၌ ဥရောပက ကိုလိုနီပြုခြင်းကဲ့သို့ ကိုလိုနီပရောဂျက်များ တွင် လူမျိုးရေးဝါဒက အခန်းကဏ္ဍတရပ်အဖြစ်ပါဝင်သည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့် အပြုအမူများ အား ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ခံစားခဲ့ကြရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Racism Oxford Dictionaries
↑ ၂.၀ ၂.၁ "Racism" in R. Schefer. 2008 Encyclopedia of Race, Ethnicity and Society. SAGE. p. 1113
↑ Newman၊ D. M. (2012)။ Sociology : exploring the architecture of everyday life (9th ed.)။ Los Angeles: SAGE။ p. 405။ ISBN 978-1-4129-8729-5။ racism: Belief that humans are subdivided into distinct groups that are different in their social behavior and innate capacities and that can be ranked as superior or inferior.
↑ Newman၊ D.M. (2012)။ Sociology: exploring the architecture of everyday life (9th ed.)။ Los Angeles: Sage။ p. 405။ ISBN 978-1-4129-8729-5။ racism: Belief that humans are subdivided into distinct groups that are different in their social behavior and innate capacities and that can be ranked as superior or inferior.
↑ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination။ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights။ December 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Reilly၊ Kevin; Kaufman၊ Stephen; Bodino၊ Angela (2003)။ Racism :aglobal reader။ Armonk, N.Y: M.E. Sharpe။ pp. 45–52။ ISBN 978-0-7656-1060-7။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လူမျိုးစွဲဝါဒ&oldid=721807" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။